Nkwekorita na Ulo | Nlekọta Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Nkwekorita n’ulo
Mmekọrịta na Home bụ Franchise na-emeri ọtụtụ mmeri na-achọ ndị ọchụnta ego na-ahụ n'anya ka ha wee gbaa ọchịchịrị ọhụụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ. Site na Norland zụrụ azụ na nne, Frankie Gray, ọ nọ na-enye ndị nne na nna nọ na London, UK na mba ọrụ nlekọta ahụike dị elu kemgbe 2004. Site na ndị nọọsụ na ndị nọọsụ na enyemaka ndị ọkachamara, dị ka crèche mobile na nne na nna na-ahụ maka ndị nne na nna. , Ntinye aka n’ulo na-enye ezinaụlọ ezi nwa, ihe ha chọrọ. Nmekorita obi na ezinulo ghotara mkpa odi na obi iru ala a na-esite n’aka ndi nne na nna maara na umu ha na enwe anuri ma nwee nchekwa. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji oge ọ bụla iji nlezianya dakọtara onye nanny ma ọ bụ onye na-elekọta ụmụaka bụ onye zuru oke maka ezinụlọ site na ntinye aka na-emeri netwọk nke ụlọ ọrụ nanny. Nkwekorita nke Harmony na Home nwere komputa nke Franchises na-aga nke oma na UK na mba uwa. Operụ ọrụ jikọrọ ọnụ na Home Franchise na-eweta isi mmalite ego na ego enwere na nkwado nke Harmony na Home larịị nke ndị na-elekọta ụmụaka. Tinyere ókèala ọhụrụ, enwere ohere dị ole na ole ịgbara mmiri. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara nhọrọ Franchise anyị, biko kpọtụrụ anyị.